Codsiga qalabka emulsification ultrasonic
In warshadaha kala duwan, habka wax soo saarka ee emulsion aad bay u kala duwan yihiin. Kala duwanaanshahan waxaa ka mid ah qaybaha loo isticmaalay (isku dar ah, oo ay ku jiraan qaybo kala duwan oo xalka ah), habka emulsification, iyo xaalado badan oo farsameyn ah. Emulsions waa kala firidhsan laba ama in ka badan oo dareereyaal ah oo aan la qaadan karin. Ultrasound xoojinta sare wuxuu bixiyaa tamarta loo baahan yahay si loo kala firdhiyo wajiga dareeraha ah (wajiga la kala firdhiyey) ee loo yaqaan 'droplet' oo ah wajiga labaad ee labaad (wajiga joogtada ah)
Qalabka emulsification Ultrasonicwaa geedi socod ay laba (ama in kabadan labo) dareereyaal aan laqaxi karin si siman loogu qaso si loo sameeyo nidaam firidhsan oo hoos yimaada talaabada tamarta ultrasonic. Hal dareere ayaa si siman loogu qaybiyaa dareeraha kale si loo sameeyo emulsion. Marka loo barbardhigo tiknoolajiyada emulsification guud iyo qalabka (sida qalabka wax lagu duubo, milkiilaha loo yaqaan 'colloid mill iyo homogenizer, iwm), emulsification ultrasonic wuxuu leeyahay astaamaha tayada emulsification sare, alaabada emulsification deggan iyo awood hoose oo loo baahan yahay.
Waxaa jira codsiyo badan oo warshadeed oo ah emulsification ultrasonic, iyo emulsification ultrasonic waa mid ka mid ah tiknoolajiyada loo isticmaalo ka shaqeynta cuntada. Tusaale ahaan, cabitaannada fudud, ketchup, majones, macaanka, caano macmal ah, cuntada ilmaha, shukulaatada, saliidda saladhka, saliidda, biyaha sonkorta iyo noocyada kale ee isku dhafan ee loo isticmaalo warshadaha cuntada ayaa lagu tijaabiyey oo lagu qaatay gudaha iyo dibedda, waana lagu guuleystay. saameynta hagaajinta tayada wax soo saarka iyo waxtarka wax soo saarka, iyo emulsification carotene biyo-ku milma ayaa si guul leh loo tijaabiyay loona isticmaalay wax soo saarka.
Muuska diirka budada ah waxaa lagu sii daayay kala firidhida ultrasonic oo ay weheliso karinta cadaadiska sare, ka dibna waxaa ku shubay amylase. Tijaabada hal abuurka ah ayaa loo isticmaalay in lagu barto saamaynta uurkaan ku leeyahay heerka soo saarida ee fiber-ka nafaqada leh ee milmi kara diirka muuska iyo astaamaha kiimikada kiimikada ee aan lagu milmi karin diirka muuska. Natiijooyinka waxay muujiyeen in awoodda haynta biyaha iyo awoodda biyaha ee ku xirnaanta ultrasonic firidhsan oo ay weheliso daaweynta karinta ee cadaadiska sare lagu kordhiyay 5.05g / g iyo 4.66g / g, siday u kala horreeyaan 60 g / g iyo 0. 4 ml / g siday u kala horreeyaan.
Waxaan rajeynayaa in waxyaabaha kor ku xusan ay kaa caawin karaan inaad si fiican u isticmaasho sheyga.